Duofold anosanganisa yakanakisisa unhu pachena, epurasitiki bhokisi wegiredhi uye paperboard chokubudisa kwakasiyana zvechokwadi kutarisana pasuru. Kusanganisa izvi zviviri dissimilar substrates rinobvumira vamwe nedzimwe chaizvo STRUCTURAL mazano, apo kupa mbiri dzakasiyana rinoonekwa, textural uye tactile nefemero.
Soft Crease ® scored vanachandagwinyira firimu zvinogona kushandiswa kusika vakawanda epurasitiki bhokisi ukomba kana kuti mahwindo kuti putira kumativi akawanda mamakisi mitsetse, kubvumira kure zvikuru maonero kuti kwakajairika windowed paperboard makatoni. Chii zvakawanda, ari vanachandagwinyira firimu inowedzera kuvimbika uye simba, vachibvumira mahwindo zvikuru kupfuura zvinoita kushandisa lightweight hwindo firimu.
Uye kunyange ukuru pasherefu kwechirwere, chero wemishonga zvaizopedza, flexo uye / kana silkscreen yokudhinda, pamwe foil tsikwa nemamwe akajeka anokosha Migumisiro, inogona kushandiswa kana mapurasitiki kana paperboard ukomba, kana vaviri.